Al-Shabaab oo 40 dagaal-yahan looga dilay dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay... - Caasimada Online
Home Warar Al-Shabaab oo 40 dagaal-yahan looga dilay dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay…
Al-Shabaab oo 40 dagaal-yahan looga dilay dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay…
Baxdo (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka ah ay iska caabiyeen weerarkii ay kooxda Al-Shabaab saaka kusoo qaaday deegaanka kaasi oo ku bilowday qaraxyo.
Sida ay ay dadka deegaanka xaqiijiyeen, dagaalka oo socday dhowr saacadood ayaa waxaa jab weyn lagu gaarsiiyey kooxda Al-Shabaab, waxayna magaalada dhexdeeda uga carareen meydad tiro badan.
Kooxda ayaa awoodi weysay inay qaadato meydadka kadib markii ay iska caabin xoog leh kala kulantay ciidamo daacad u ah culumo ku sugan Baxdo oo halkaas ka akhriyo duruus diini ah.
Khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidamada dadka deegaanka ee daacadda u ah culimada Ahlu Sunna iyo ciidamada maamulka, waxaana la xaqiijiyey toddoba qof oo dhimasho ah iyo tobaneeyo kale oo dhaawac ah.
Al-Shabaab ayaa horey isugu dayday inay qabsato Baxdo, balse kuma guuleysan, waxaana joogo ciidamo daacad u ah culamo halkaas ku leh madaaris waaweyn oo lagu barto diinta Islaamka.
Deegaanka Baxdo ayaa 90-km u jiro magaalada Cadaado, waa deegaan hoos tago Cadaado oo aan weli loo aqoonsan degmo.